दशैं बिदामा घुम्ने योजना बनाउनुभएको छ? घुमघामको चुस्त आर्थिक ब्यवस्थापन यसरी गर्नुस् – Khabar Silo
दशैंतिहारजस्ता चाडबाडका बेला आन्तरिक पर्यटन मात्र होइन बिदेश घुमघाममा जाने चलन बढ्दै गएको छ। घुमघामका लागि पैसाको मात्र नभई बुद्धिमत्ता पूर्ण आर्थिक योजना पनि चाहिन्छ।
यदि तपाई विदेश जान चाहनुहुन्छ भने पहिले नै आफूलाई आर्थिक र मानसिक रुपले तयार पार्नुहोस्। हालै एक सर्वेक्षणले पनि के देखाएको छ भने मानिसको घर किन्ने इच्छापछि दोस्रो इच्छा घुम्ने नै हुन्छ। तर घुमघामकालागि इच्छा मात्र भएर पुग्दैन ब्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुस्त हुनुपर्छ। तबमात्र योजनाबद्ध भएर घुम्न सकिन्छ।डोमेस्टिक होलिडे त ब्यवस्थापन गर्न सहजै होला तर बिदेश घुम्ने योजना छ भने थप तयारी आवश्यक हुन्छ।आफ्नो भ्रमणलाई तनावपूर्ण नभई सम्झनालायक बनाउनकालागि केही कुराहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।
कुनै पनि कुराको बजेट बनाउनु सबै आर्थिक लक्ष्यहरुलाई पूरा गर्ने मन्त्र हो। आफ्नो घुमाइकालागि कति पैसा आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमानित आँकडा बजेटबाट प्राप्त हुन्छ।
आफ्नो फेवरेट डेस्टिनेसनकालागि खर्च छुट्याउनकालागि सबैभन्दा पहिले एउटा खर्चको लिस्ट तयार पार्नुहोस्। जब अनुमानित लागत थाहा हुन्छ त्यसपछि मात्र घुम्नकालागि पैसाको जोहो गर्न थाल्नुस्।
आफ्नो खर्चको हिसाबले हवाइजहाज, बस वा रेल के उपयुक्त हुन्छ त्यो यातायातको छनौट गर्नुपर्छ। यसकासाथै खाना, बसाई, सपिङ र घुमघामका लागि पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ।आफ्नो ट्राभल बजेटलाई आफ्नो रेगुलर बजेटभित्रै पार्ने कोशिश गर्नुहोस् ताकि घुमघामबाट फर्किदा ऋणको बोझ नहोस्।
लगानीबाट पैसा जोहो
मासिक रुपमा आम्दानी हुँदा घुमघामको लागि छुट्टै पैसा जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो। त्यसैले घुमघाम प्रयोजनकालागि भनेर मासिक रुपमा अघि देखि नै पैसा जम्मा गर्नुस्। हरेक महिना केही न केही पैसा बचत गरिराख्दा घुमघामको बजेटमा बल पुग्छ।यस्तै आफ्नो बचत खातामा केही रकम जम्मा गरिराख्नुस् जसको ब्याजले पनि घुमघामलाई सहयोग पुगोस् जस्तो मुद्दती खातामा केही पैसा राख्न सकिन्छ ।
यसैगरी म्युचुअल फण्डमा केही पैसा पनि राख्न सकिन्छ। ब्यबस्थित लगानी योजना अनुसार लगानी गर्दा थप पैसा प्राप्त हुन्छ यसले तपाई र परिवारको घुम्ने सौख पूरा गर्न सकिन्छ।यस्तै बोनस वा अप्रत्यासित आम्दानीलाई पनि भ्याकेसन फण्डका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बोनसबाट प्राप्त रकमलाई प्राथमिकताका अरु क्षेत्रमा राख्ने वा घुमघामको लागि राख्ने यो पहिले नै तय गर्नुस्। यसबाट पनि घुमघाम फण्ड बढाउन मद्दत पुग्छ।
बुकिङ छिटो गरौं
चाडबाडमा घुम्ने योजना बनाउँदा सकेसम्म छिटो टिकट बुक गर्दा राम्रो। एडभान्स बुकिङ गर्दा धेरै छुट पाइन्छ । पिक सिजनमा रेट बढी हुने हुँदा थप खर्च हुन जान्छ। त्यसकारण बजेट ट्राभलिङका लागि सकेसम्म पहिले नै टिकट लिनुपर्छ।
पैसा नभई पनि घुमघाम
यदि हतारमा घुम्ने प्लान बन्यो र साथमा पर्याप्त पैसा पनि छैन भने के गर्ने? बैंक तथा बित्तीय कम्पनीहरुले हाल ट्राभल लोन समेत दिन थालेका छन्। यो एक किसिमको ब्यक्तिगत ऋण जस्तै हो।खासगरी बिदेश यात्रा गर्दा यस्तो किसिमको ऋण दिने चलन छ। यसमा ब्याजदर भने बढी लिने गरिन्छ। तर पैसा कम भएको खण्डमा यस्तो ऋणा लिने र घुमघामबाट फर्केर बिस्तारै तिर्ने पनि गर्न सकिन्छ।
क्रेडिट कार्ड र बीमा
बिदेशमा घुम्न जाँदा क्रेडिट कार्ड र बीमा आवश्यक पर्छ। आकस्मिक रुपमा धेरै पैसा चाहिएको खण्डमा क्रेडिट कार्डले सहयोग गर्छ। फ्लाइट क्यान्सिल हुँदा, ब्यागेज हराउँदा वा अन्य परिस्थितीमा पनि आर्थिक रुपले बलियो भैरहन क्रेडिट कार्ड जरुरी छ। त्यसैले घुमघाममा जाँदा केही नगद तथा क्रेडिटकार्ड बोक्न नबिर्सनु्स्। राम्रो घुमघामका लागि पर्याप्त पैसा र बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ।
। हङ्कङमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू गर्ने चीनको कदमको बेलायत लगायतका मुलुकहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । बेलायतले हङ्कङमा रहेका ३० लाख नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा बसोबासका लागि प्रस्ताव गरेको छ भने अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा बैंकहरुमाथि प्रतिबन्धसहितको हङ्कङ स्वायत्तता ऐन ल्याइएको छ । प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मतिले पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘चिनियाँ अधिकारीसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि बैंकलाई जरिवाना […]